Kireystayaasha waxay awood ka helaan abaabulka wadajir. Fiiri tan astaan of Inquilinxs Unidxs por Justicia (Kireystayaasha Midoobey ee Caddaaladda) si ay wax badan uga bartaan.
Diyaar ma u tahay inaad la wadaagto Awoodaada?
Saaxiibkay ayaa dhawaan i weydiiyay su'aal sida muuqata fudud, hadana murugsan: "Sidee ayaad ugu raaxeysan tahay awoodda?" Su’aashu kamay yaabin. Awooddu waa fikrad waaxda samafalka ee Minnesota, oo ah meel aan guriga ugu yeeray labadii sano ee la soo dhaafay, ayaa ku waalan. Ayaa awood leh? Kumaa awood u leh inuu wax ka qabto? Sideen awood u siineynaa?
Marka la eego dilkii George Floyd iyo kuwa kale oo aan tiro lahayn, awooddu waa mudnaan ay tahay inaan si qoto dheer u baarno. Had iyo jeer waa hub ama aalad — si ula kac ah oo aan ula kac ahayn loo adeegsado - in la sii wado nidaam xaqiraya dadka midabbada leh ee dalkan. Dhammaanteen saameyn ayaan ku leenahay, qaar ka badan kuwa kale. Si loo baabi'iyo nidaam u oggolaanaya rabshadaha ay dowladdu oggolaatay ee ka dhanka ah ragga iyo dumarka Madoow ee aan hubeysnayn, waa inaan aqoonsanno sida aan ugu adeegsanno awooddeenna qalab ahaan iyo inaan ula kac u noqonno sida maalin walba loo isticmaalo.
Awoodda makro waa awoodda dowladda (maxalliga, gobolka, iyo qaranka) inay beddesho nidaamyada siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaabeeya bulshada. Heerka awoodda sare, waxaa jira isbeddelo ay tahay inaan sameyno, sida dib-u-habeynta nidaamka cadaaladda dambiyada iyo ballaarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee u oggolaanaya dadka Madoow inay dhisaan hanti. Eber Olole iyo Isbahaysiga Dhaqaalaha Madow waa ururo maalin kasta u shaqeeya dejinta isbeddelada heerka nafaqada. Awooda yar waa go aamada go'aan shaqsiyeed aan ku leenahay ismaamul ahaan. Ururadu iyo shaqsiyaadkuba waxay jimicsadaan awood yar.
Jimicsiga Awoodda Micro
Si aad ugu faafno fikirkeenna, iyo inaan si dhab ah u kala qaadno nidaamka ku-sarraynta caddaanka, waxaan ballaarinaynaa awoodeena yar-yar oo ku saleysan dhawaanshaha iyo helitaanka awoodda, awoodda, iyo saamaynta. Intee in leeg ayaan dooranay inaan u isticmaalno awoodeena yar yar maadaama ay balaaraneyso isla markaana qandaraasyadu ay u dhigmayaan si toos ah inta aan dooneyno inaan carqaladeyno nidaamyada awood la'aanta ee hada jira iyo go'aanka firfircoon ee aan awooddeena kula wadaageyno dadka Madoow ee nidaamka xuquuqdooda looga qaatey. Haddii ujeeddadaadu tahay cunsuriyad-diid, iyo helitaanka ilahaagu ay muhiim tahay, isbeddellada aad sameyn karto ayaa sii weynaanaya isla markaana mas'uuliyaddaadu weynaanaysaa. Si si fudud loo dhigo, waaritaanka iyo cimri dhererkeena ficilkeenu waa inuu muraayadaha ka muujiyaa adduunka aan qiraneyno inaan dooneyno inaan abuurno.
The heerka micro, taas oo aan aaminsanahay inay tahay inuu qof kastaa sameeyo, waa mudaaharaad, isbarasho, iyo tabarucaad loo fidiyo ururada safka hore kaga jira la dagaalanka cadaalad darada. Si kastaba ha noqotee, dadku waa inay ku dhaqmaan wax ka baxsan heerkan aasaasiga ah. Waa inaan su'aalo weydiino kuweenna goobta bulshada oo aan fahansanahay sida xubinnimada dhaqammada waaweyn ay u saameeyaan awooddeena, awooddeena, iyo saameynteenna. Mar haddii aan ku saleyno aqoontaas, waa inaan si firfircoon oo joogto ah awood ugu dhisnaa bulshooyinka xuquuqdooda la duudsiiyey. Waa inaan si firfircoon oo joogto ah u maal galino waqtigeena, tamarta, saameynta, maamulka, iyo ilaha dhaqaalaha xalalka awooda wadaaga, taasoo horseed u ah nidaamyada isbeddelaan iyo awood qaybsi ballaadhan.
Ardayda Madow, Latinx, iyo kuwa asaliga ah ayaa lagu edbiyey si ka daran oo ka badnaan badan ardayda cadaanka ah, hal tusaale oo ah awooda yar. Eeg muuqaalkan si aad waxbadan uga barato.
Jimicsiga awooda yar waa go'aan qaadasho firfircoon, oo si isdaba joog ah u laaban una la jaan qaada kicinta horumarka nidaamka ama nidaamka, waxayna u muujisaa si kala duwan qof walba. Kaliya maahan plutocrats iyo sayidyada caalamka yaa awoodi kara. Jimicsiga awoodda yar micnaheedu waa macallinka caddaanka ah isla markaaba uma diro ardayda “Madowga ah” ardayda madow xafiiska xafiiska maamulaha calaamadda ugu horreysa ee “dhaqankooda xun”, oo ah qaab hore oo ah dembi ka dhigista carruurta Madoow.
Adeegsiga awood yar wuxuu door ka ciyaaraa carqaladeynta dhuumaha iskuulka ilaa iyo xabsiga ee ka bilaabma go'aamada fasalka. Ganacsatada maal-gashiga waxay adeegsadaan awood yar markay abuuraan shirkado ay ka mid yihiin shirkado jinsi, jinsi, iyo waxbarasho, dhisida shabakado u bandhigi doona Ganacsatada madow. Rafaa Tech Alexis Ohanian wuxuu adeegsaday awood yar markii uu iska casilay kursigiisii gudiga ee Reddit wuxuuna ku booriyay guddiga inay u magacaabaan khabiir Madoow bedelkiisa, oo ay weheliso ujeedo shakhsiyeed oo joogto ah sababaha cadaalada bulshada. "Waxaan rumeysanahay in iscasilaadda ay dhab ahaantii noqon karto ficil hoggaamineed oo ka yimaada dadka awoodda haya hadda," ayuu yiri. Gudiga Reddit ayaa ogolaaday Michael Seibel bedelkiisa waxyar kadib. Si fudud, jimicsi awood yar waxaa loola jeedaa ula kac.
Sannadkii 2016, markii aysan faa'iido ama waxtar ku lahayn in sidaa la yeelo, Ben & Jerry wuxuu ku dhawaaqay nolol Madoow. Dhawaan ayay ku muujisay qiimaheeda ficil, iyadoo ugu baaqeysa Congress-ka in la sameeyo gudi "daraasad ku sameeya saameynta cunsuriyada iyo takoorka, iyo bixinta habab ciribtirka sarraynta caddaanka. ” Xilligan, shirkado badan iyadoo inta badan hoggaanka caddaanku ay si geesinimo leh u sheegeen arrinta nolosha Madow. Isla shirkadahaas ayaa ballan qaaday balaayiin doolar sababaha Madoow. Haddana hoggaamiyeyaasha isla shirkadahaas daruuri kama aha inay muraayad u noqdaan bulshada ay doonayaan inay abuuraan. Akhlaaqda, ficilada, iyo matalaadu waxay waxbadan ka qabtaan carqaladaynta nidaamyada awooda ee sinaan la'aanta marka loo eego hadalada weligood dhici doona.
Raaxo la'aantu waxay u horseedi kartaa koritaan
Cilmiga barashada cad Robin DiAngelo ayaa sheegay in “Midab takoorku waa dhibaato cadaan ah, oo ay abuureen dad cadaan ah, oo ay ka faa’iideysteen dadka cadaanka ah.” Qaar badan oo ka mid ah asxaabteyda cadaanka ah iyo asxaabteyda, tani waa markii ugu horeysay ee ay si qoto dheer uga fikiraan jinsiyad iyo awood. Qaarkood waxay bilaabeen inay dareemaan daal dadka madow maalin walba wajaha. DiAngelo wuxuu leeyahay adkeysi ayaa looga baahan yahay muddadan raaxo la'aanta ah. Kaliya waqtiyada raaxo la'aanta koritaanka dhabta ah ayaa dhaca.
Muddadan aan raaxada lahayn waxay kaloo nooga baahan tahay inaan iska tuurno silsiladaha kaamilka. Qofna ma hayo jawaabaha oo dhan, laakiin taasi waxay marmarsiiyo u noqon kartaa inaadan bilaabin shaqadan. Waa marmarsiinyo sahlaysa sida xaalku yahay. In culayska la saaro kuwa la duudsiiyay si ay wax kuugu bartaan oo aad uga qaybqaadato si macno leh waa nooc ka mid ah caajiska caqliga. Waxa daqiiqadani u baahan tahay ayaa ah inta badan dadka Mareykanka inay ka saaraan muraayadaha midabka-midab-badan-badankood markii ugu horreysay-si ay u arkaan Ameerika oo loo dhisay si loo hubiyo in nolosha Madow aysan waligeed muhiim ahayn. Aragti indho cad ayaa dalbanaysa inaan nidhaahno in nolosha oo dhami ay muhiim tahay, waa inaan si miyir iyo ula kac ah u xaqiijinnaa arrinta nolosha Madow. Xaqiijinta kadib, waa inaan ficilnaa.
Xilligan waa ka duwan yahay. Daqiiqadani waa mid caalami ah. Daqiiqadani waa mid xanuun badan. Aniga ahaan, xilligan had iyo jeer wuxuu ahaa awood. Si tan ay uga badnaato daqiiqad kale, waa inaan jimicsi ku sameyno awoodeena yar-yar oo aan ujeedo iyo ujeedo isku day ah inaan ku sameyno sinaan.
Xilligan waa ka duwan yahay. Daqiiqadani waa mid caalami ah. Daqiiqadani waa mid xanuun badan. Aniga ahaan, xilligan had iyo jeer wuxuu ahaa awood.
Waa inaan sidoo kale fahamnaa in awooddu aysan ahayn erey la soo koobi karo, laakiin waa mudnaan aan qaadanno. Weydiiso sida awooddaadu u ballaarato una qandaraasleyso iyadoo ku saleysan goobtaada bulshada iyo maamulkaaga booska. Fahmaan soohdimaha iyo caqabadaha awooddaada oo daacad u noqo naftaada inta aad diyaar u tahay inaad ku bixiso awooddaada, la wadaagto awooddaada, iyo heerka raaxo-darrada ah ee aad doonaysid inaad ku qanciso isticmaalka awooddaas.
Culayska ayaa qaar ka culus. Ficil ula kac ah ayaa abuuray adduunkeena kaliya ficil ula kac ah ayaa abuuri kara mid cusub. Markaa, jawaabta su'aasha saaxiibkay, ee ah "Miyaan ku qanacsanahay awoodda?" Haa. Markay awoodeyda yar yar sii fidayaan, waxaan doortaa inaan u isticmaalo kheyraadkeyga si aan u joojiyo nidaamyada awood la'aanta hadda jirta. Waxaan doortaa inaan u adeegsado booskeyga guddiyada si aan uga hortago sida wax u socdaan isla markaana aan ugu riixo wararka fikirka iyo waxqabadka. Waxaan doortaa inaan sii wado isticmaalka adeeggeyga 'McKnight's endowment', si aan ugu riixo siyaabaha caasimadeenu ugu sinnaan karto maamulayaasha imanaya iyo ganacsatada kala duwan ee ay taageeri karaan. Waxaan qabanayaa qaybtayda isticmaalka awooddayda. Su’aasha haddaba taagan ayaa ah: Goorma ayaad ku raaxeysan doontaa inaad kharajkaaga bixiso?